Caymiska Shaqo la'aanta | CareerForce
Gunooyinka shaqo la'aanta iyo wixii kasii danbeeya
Inaad shaqada lumiso maaha wax fudud. Waxaad dareemi kartaa layaab. Waxaad laqamuunyoon kartaa inaad lumisay bulsho ama xataa sharaftaadii. Iyo, dabcan, waxay kugu reebaysaa saamayn dhaqaale. Nasiib wanaag, caawimaad ayaa laheli karaa.
Caymiska shaqo la'aanta ayaa si kooban usii dabooli kara qayb kamid ah mushaaraadka kaadhumay, marka waa muhiim inaad sida ugu dhakhsa badan ucodsato. Arag haddii aad uqalanto gunooyin adoo buuxinaaya codsigaan oonleenka ah.
Khabiir kasocda CareerForce ayaa kaacaawin kara inaad kasii gudubto caymiska shaqo la'aanta. Anagoo kusiinayna taageero kuugaar ah oo qof iyo qof ah, waxaan kugu hagi doonaa fursadaha cusub. Waxaan kusaaraynaa wado kalsoonidaada kor uqaada oo mustaqbal cusub kuufurta. Booqo mid kamid ah xarumaheena dhan kudhawaad 50 xarumood oo leedahay CareerForce kuna yaala daafaha Minnesota si aad u aragto sida aan kuucaawin karno.
Qaabab badan ood caawimaad kuheli karto
Hel caawimaad lagaa siiyo guriyaynta, gadiidka ama baahiyaha kale
Baro qaababka aad uaqabsan karto walaacyada kadhasha shaqo beelka
Hel tusmada raadinta xirfada oo qof iyo qof ah
Baro macluumaadka kusaabsan dookhyada ganacsiga ee wanaagsan kadib markaad shaqada lumiso